Madheshvani : The voice of Madhesh - चिनियाँ मोडेल स्थापित गर्ने प्रधानमन्त्रीको उद्देश्य छ : अभिषेक प्रताप शाह
चिनियाँ मोडेल स्थापित गर्ने प्रधानमन्त्रीको उद्देश्य छ : अभिषेक प्रताप शाह
अभिषेक प्रताप शाह, सांसद, नेपाली कांग्रेस
० अहिले दिनप्रति दिन कोरोना संक्रमण बढ्दै गइरहेको छ । तराई/मधेशका जिल्लाहरुमा निषेधाज्ञा लागू भएको छ । यो भयावह अवस्थालाई कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ ?
— यस्तो अवस्थामा नेपालमा मात्रै होइन, पूरा विश्वमै पहिलोपटक आएको छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो सरकार नै के गर्ने, के नगर्ने अलमलमा छ । कहिले लकडाउन खोल्छ, कहिले फेरि लकडाउन लगाउँछ, कहिले जोर÷बिजोर गर्छ त कहिले हटाउँछ । कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको फितलो व्यवस्थापन देखिएको छ । प्रत्येक घरबाट एक जनाको कोरोना टेष्ट हुनुपर्दथ्यो । त्यत्रो ठूलो जनसंख्यामा छैन हाम्रो, त्यति व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो । तर, सरकारले गरेन । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि कोरोनालाई हलुका रुपमा लिएका छन् । बेसार पानी खानुस् निको भइहाल्छ भन्नुहुन्छ । सुरुवाती अवस्थामा त्यसरी हाम्रो सरकारले नै गम्भीरतापूर्वक लिएन । अहिले समुदायस्तरमा कोरोना प्रवेश गरिसकेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न कि औषधि नै आउनुप¥यो, कि त उच्चस्तरको निर्णय लिनुपर्छ ।
० समुदायस्तरमा कोरोना प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा सरकारको कदम कस्तो हुनुपर्ने हो ?
— अहिलेको अवस्थामा सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्छ । हामीले सुनेअनुसार रुसले कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन पनि बनाइसकेको छ र त्यसको फाइनल एप्रुवल पनि भइसकेको छ । अब त्यो भ्याक्सिन सरकारले किन्ने कि नकिन्ने त्यो पनि एउटा विकल्प हो । त्यो भ्याक्सिन किन्नका लागि आजैदेखि सरकार लाग्यो भने नेपाल आउन कम्तीमा तीन÷चार महिना लाग्ला । यस विाषयमा पनि सरकार कति गम्भीर छ । यसमा कमिशन र अनियमितताको खेलाबेला नगरिकन जनताको रक्षाका लागि त्यो भ्याक्सिन कहाँबाट ल्याउने हो तयारी अहिलेदेखि नै गर्नुपर्छ । सरकारले एक कदम अगाडि सोच्नुपर्छ ।
० रुसमा तयार भएको भ्याक्सिन नेपालजस्तो साना मुलुकहरुमा आउन कम्ती ५/६ महिना लाग्छ नि ?
— त्यसका लागि सरकारले अहिलेदेखि नै योजना बनाउनुपर्छ । रुसले भ्याक्सिन बनाएको छ, रुसमा त्यति ठूलो जनसंख्या छैन । सबभन्दा बढी जनसंख्या चीन र भारतको छ । त्यो भ्याक्सिन जन कल्याणका लागि बनाइएको हो । त्यो यदि भारत वा चीनसम्म आइपुग्छ भने नेपालसम्म आउन अप्ठ्यारो छैन । चीन वा भारतमा कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन आइसकेपछि नेपालमा पनि मज्जाले ल्याउन सकिन्छ ।
० कोरोनाविरुद्ध तीनै तहका सरकारको काम कस्तो देख्नुहुन्छ ?
— पहिलोपटक नेपालमा संघीय संरचनाअनुसार सरकारहरु गठन भएका छन् । ती प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अहिले पनि पूर्ण अधिकार दिइएको छैन, केन्द्रित छ । संविधानले दिएका अधिकारहरु प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने थियो, त्यो गरिएको छैन । प्रदेश सरकारलाई त्यति अधिका दिइएको छैन । त्यसकारणले प्रदेश सरकारले राम्ररी काम गर्न सकेको छैन । स्थानीय र प्रदेश सरकारभित्र पनि भयंकर भ्रष्टाचार मौलाएको छ । त्यसमा कसरी न्यूनीकरण गर्ने, सरकारको कुनै योजना छैन । दिनप्रति दिन भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । तल्लोस्तरदेखि माथिल्लोस्तरसम्म भयंकर भ्रष्टाचार मौलाएको छ । यसमा सरकार र सम्बन्धित निकायको विशेष ध्यान जानुपर्छ ।
० यस्तो महामारीका बेलामा पनि भ्रष्टाचार मौलाएको हो ?
— यस्तो महामारीका बेलामा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी सबै मिलेर देशलाई लुटिरहेका छन् । यसभन्दा लाजमर्दो कुरा के होला कि नेपालमा किट ल्याउनका लागि ओम्नीलाई दिइयो, ओम्नीले व्यापक भ्रष्टाचार ग¥यो । कोरानाका कारणले देशमा जनता त्रसित र पीडित छन्, तर सरकारका जुन संयन्त्रहरु छन्, तिनीहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । यस्तो जटिल अवस्थामा पनि देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । त्यसमा सम्बन्धित निकाय, प्रधानमन्त्री स्वयम्को ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्री त अहिले एकदम तानाशाह हुनुभएछ । उहाँले फलानो व्यक्ति भ्रष्टाचारी होइन भनेर भन्दिनु हुन्छ । सरकारको संयन्त्रलाई नै उहाँले चुनौती दिनुहुन्छ । त्यसकारणले यस्तो विषम् परिस्थितिमा पनि सरकारले आफ्नो दिशा निर्धारण गर्न सकेको छैन ।
० अबको स्थिति कस्तो देख्नुहुन्छ ?
— नेपालको स्थिति यस्तै थियो, यस्तै रहन्छ र भविष्यमा पनि भन्न सकिन्न । जबसम्म युवा नेतृत्व माथिल्लो तहसम्म आउँदैनन्, तबसम्म कर्मकाण्डी सरकारले जनतालाई यो समस्याबाट बाहिर निकाल्नै सक्दैन । नारामा मात्रै समृद्धि ल्याउँछ । देशलाई कम्युनिष्टीकरण गर्ने, देशलाई पोलिटब्युरो सिस्टमबाट चलाउने, लोकतन्त्र समाप्त गरिदिने यो सरकारको उद्देश्य नै छ । कम्युनिष्टले कहिल्यै पनि लोकतन्त्रलाई मानेकै छैन । यो देशलाई चिनियाँ मोडेलमा लैजाने यो सरकारको उद्देश्य नै देखिन्छ । यसका नेकपाले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग सम्झौता पनि गरिसकेको छ । उहाँहरुले भिडियो कन्फरेन्स पनि गरिेसक्नुभएको छ । नेपाली कांग्रेसले यदि भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेससँग कन्फरेन्स गरेको भए त यहाँ भयंकर बबाल हुन्थ्यो । तर नेकपाले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग सम्झौता पनि गर्छ, भिडियो कन्फरेन्स पनि गर्छ, यसमा कसैको आपत्ति पनि हुँदैन । यो देशलाई रणभूमिको अखाडा बनाउने षड्यन्त्र हो र यसको सुरुआत भइसकेको छ ।
० चीनबाट उत्पन्न भएको कोरोना भाइरस त्यहाँ नियन्त्रण भइसकेको छ । त्यहीं मोडलअनुसार नेपालमा पनि कोरोना नियन्त्रण गर्ने कतिको सम्भव छ ?
— पहिलो कुरो, चीनमा प्रेस स्वतन्त्रता छैन । त्यहाँ कोरोना देखियो कि उसलाई क्वारेन्टाइनमा लगिन्छ कि गायब गरिदिन्छ । त्यस्तो अवस्था चीनमा छ । चीनको आन्तरिक कुरो के छ, पूरा विश्वलाई नै थाहा छैन । त्यसकारणले चिनियाँ मोडेल कुनै पनि हालतमा नेपालमा स्वीकार हुन सक्दैन । किनभने नेपाली जनता लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छन् ।
० कोरोना कहरकै बीच नेपाली कांग्रेस आफ्नो १४औं महाधिवेशनको तयारीमा छ । तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन सम्पन्न हुन्छ ?
— कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका बनिसकेको छ । सोहीअनुसार काम पनि भइरहेको छ । अहिले कोरोनाको कहर दिनप्रति दिन बढ्दै गएको छ । त्यसले गर्दा कम्तीमा दुई÷तीन महिना समयावधि थप गरेर सम्पन्न गर्नुपर्छ । व्यावहारिक कुरो गर्नुपर्छ, तोकिएकै मितिमा त महाधिवेशन हुनै सक्दैन । तर केही अवधि थप गरेर कांग्रेसले महाधिवेशन त गर्नैपर्छ ।
० भनेपछि, यही वर्षभित्र महाधिवेशन हुने सम्भावना छैन ?
— यही वर्षमा कांग्रेसको महाधिवेशन हुने सम्भावना कम छ तर हामी प्रयासरत् छौं ।
० सभापति शेरबहादुर देउवाले विभागहरु गठन गर्दा पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न भयो नि ?
— कांग्रेस एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो, विरोध र समर्थन त भइहाल्छ । जो–जोले विरोध गरिरहनुभएको छ, उहाँहरुको तर्फबाट पनि समावेश गराइन्छ । त्यसपछि विरोध आफै हराएर जान्छ ।
० महाधिवेशनको मुखमा विभागहरु गठन गर्नुपर्ने कारण के थियो ?
— यति दिनसम्म गरिएको थिएन तर अहिले विभाग गठन भएको छ । यसलाई सकारात्मकरुपमा लिनुपर्छ । धेरै विभागहरु खाली छन्, पार्टीले गर्नैपर्ने थियो । पहिला नै गरिएको भने नेता कार्यकर्ताहरुले जिम्मेवारी पाउँथे र पार्टीका केही न केही गतिविधि गर्थे । पार्टीमा कार्यकर्ताहरुले गरेको योगदानको मूल्यांकन गरेर विभागहरुमा मनोनित गरिएको छ । यो शुभ संकेत हो कांग्रेसका लागि ।
० कांग्रेसको यो महाधिवेशनबाट अब कस्ता नेतृत्व आउँछन् ?
— कांग्रेसको अबको नेतृत्व पाको र युवाको मिश्रण हुनुपर्छ । जुन प्रकारले आर्मी परिचालन हुन्छ, आर्मीका कमाण्डर पाको उमेरका हुन्छन् र जवानहरु युवा हुन्छन् । त्यहीं प्रकारले कांग्रेसमा युवा र पाको उमेरको समिश्रण हुनुपर्छ । कांग्रेस एउटा ऐतिहासिक र पुरानो पार्टी भएकोले यसमा धेरै ऐतिहासिक नेताहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई पनि माइनस नगर्ने र युवा नेतृत्वलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने त्यस्तो किसिमको एउटा संयुक्त मेकानिजम बनाई पार्टीलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
० महाधिवेशनमा तपाइँको तयारी के छ ?
— म अहिले पनि केन्द्रीय सदस्य छु र केन्द्रीय सदस्यकै लागि लड्छु । मेरो दावा केन्द्रीय समितिका लागि हुन्छ र जितेर आउँछु ।